China MZF Magnetic Drive Pump vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Saizi: DN25 ~ DN400
Unyanzvi: ~ 2000m3 / h
Tembiricha: isingasviki 250 ℃
Simba: ~ 560kW
1.Single danho kuroora kubvisa, pamusoroung chimiro
2.MZF magineti pombi rudzi rwe centrifugal pombi iyo isina shaft chisimbiso, isina zvachose kuvuza, uye inotyairwa kuburikidza nemagineti yekubatanidza, uye inhengo yemhuri yemagineti inotyairwa mhuri.
3.It adopts svikiro kuti womukati kutenderera kuti girisi uye kutonhora remagineti coupling uye zvishoma nezvishoma mumatope kubereka. Kutenderera kwemukati kunosanganisira kumanikidza kwakadzika kutenderera uye kushomeka kwekumanikidza. Iyo yakanyanya kumanikidza yemukati kutenderera pombi inokodzera iyo yepakati iyo iri nyore yekupisa, yakaderera kumanikidza yemukati kutenderera pombi inokodzera iyo yepakati iyo isiri easy ye vaporization.
4.Pombi dzemvura dzine njodzi dzinozovezwa nekaviri chibatiso goko, Ichave alarm apo chekutanga chemukati cheganda chikaedzwa.
5.Iyo yekupisa jekete uye inotonhora bhachi inogona kushandiswa zvinoenderana nekushanda mamiriro.
7.Panguva yekushanda, iyo magnetic pump's axial simba inozvienzanisira ne hydraulic simba, kukanda disc kungotakura iko pakarepo axial kukanda kana pombi yatanga uye kumira.
Magnetic pombi inogona kuwana izvozvo pasina kuvuza, yakakodzera kuendesa inoparadza, ine chepfu, inogona kutsva, inoputika, inodhura kana yakapusa gasification mvura. Uye zvakare, magnetic pombi inokodzera zvakare kuendesa yakanyanya tembiricha, yakaderera tembiricha fluid uye mvura pasi pechiyero mamiriro.
Pashure: API610VS6 Pump TDY Muenzaniso
Zvadaro: YANGU Magnetic Kutyaira Pump